Yakapfava girazi, Laminated Girazi, Insulated Girazi - LYDGLASS
Iine anopfuura makore makumi maviri emakore emutsara ruzivo, Vanhu vedu vakagadzirira kupindura mukati me7 Maawa.
Yakaomarara Hunhu Sisitimu
Mhando yemhando: AS / NZS 2208: 1996, CE-EN12150, ANSI Z97.1, UNOGONA CGSB12.1-M90.
OEM uye Tsika-Yakagadzirwa
Isu tine ruzivo muOEM (Tsika Yakagadzirwa) Girazi & MIRROR.
Inotangisa yehunyanzvi yepasi rese yekugadzira tekinoroji uye mhando yepamusoro mbishi yezvinhu zvedongo.
Kuparadzira girazi regree ...
Yakabatanidzwa girazi hinji ...
8mm 10mm 12mm munyoro ...
Yakavharwa magirazi mikova ...
Akarurama Insulated Glas ...
4mm girazi Bhodhoro
3mm toughened girazi fo ...
10mm 12mm wakatsamwa gla ...
5mm yakajeka kutsamwa gla ...
8mm Acid chinopinda ndarira ...
Musoro weGirazi Railings
Girazi REMUDZIMA FENCING
aruminiyamu yekutuka girazi
girazi patio chifukidziro
Jul-30- 2021 3.2mm kana 4mm Yakakwira yakajeka girazi panopisa girazi
Jul-29- 2021 Chii chinonzi Ultra-yakajeka girazi? Ndeupi musiyano neakajairika girazi?
Jul-29- 2021 Iwe unoziva iyo yekushisa tembiricha yegirazi inki?
Jul-29- 2021 Maitiro ekudzivirira kumucheto kutsemuka kana uchicheka girazi nemvura jet?
Jul-29- 2021 Nzira yekusiyanisa "girazi" - mutsauko pakati pezvakanaka zvegirazi rakamisikidzwa uye girazi rinovhara
Jul-16-2021 1/2 ”kana 5/8, Yakakora Ultra Yakajeka Hasha, Yakabatanidzwa Girazi yeIni Rink Fence
Jul-16-2021 10mm Yakapfavirira Girazi yekugezera madhoo
Hwakagadzwa muna 1998, QinHuangdao LianYiDing Glass Co., Ltd. iri Qinhuangdao City, pedyo QinHaungdao Port uye Tianjin chengarava pamwe nyore chokufambisa. LYD Girazi seyakagadzika-girazi gadzira mugadziri uye mutengesi muNorth China, tiri kubata neTered Glass, girazi rakamisikidzwa, girazi rakavharika, girazi, girazi remoto, girazi rinopisa, girazi rekudhinda Screen uye Low-e Girazi.
Seyakadzika-kugadzira girazi gadziri uye mutengesi, Girazi redu rinotumira kunze kuAmerica, Europe, South Africa, South Asia, North America.Saka kana ukatisarudza isu tinogona kukupa yakanakisa mhando uye sevhisi!